Tag: iskuxirka waxyaabaha | Martech Zone
Tag: waxyaabaha ku jira
Monday, August 21, 2017 Talaado, Agoosto 22, 2017 Douglas Karr
NetLinePortal waa barxad jiil hogaamin ah oo bilaash ah B2B halkaasoo ay wakaaladuhu ka abuuri karaan olole isku xidhka mawduucyada si loo wado wacyigelinta ama qabashada jihooyinka. Nidaamku wuxuu bixiyaa laba waxyaalood oo kaladuwan: LeadFlow si loo abuuro hoggaamiyeyaal, kuu oggolaanaya inaad sifeyn ku sameyso waxyaabahaaga, aad dalbato miirayaasha hoggaanka iyo dhibcaha, aad ku socodsiiso suuq ku saleysan xisaab, ku dar su'aalo caado ah, dejiso miisaaniyaddaada iyo jadwalkaaga, helitaanka warbixinnada ololaha, iyo inaad hesho hoggaan tayo leh. Madaxdu waxay ka bilaabmaan $ 9 halkii hoggaamiye. ContentFlow si aad u waddo wacyigelinta calaamadaha adoo adeegsanaya iskuxirka waxyaabahaaga iyo helitaanka ololaha
Isballaarin: Isukeenista Mawduucyada Wadajirka ah ee Kooxaha
Sabtida, Juun 13, 2013 Jimco, Juun 19, 2015 Douglas Karr
Spundge waxay fududeyneysaa la socoshada macluumaadka ugu fiican, jahwareerinta aqoonta, sameynta fikradaha kalifaya, iyo sameynta waxyaabo saameyn ku leh. Waxay leeyihiin labadaba nooc bilaash ah iyo nooc xirfadeed oo ah barnaamijkooda. Spundge PRO waa barxad wax ka kooban oo u sahlaysa kooxaha iyo shaqsiyaadka inay ogaadaan, saxaan, abuuraan oo u qaybiyaan waxyaalo soo jiidasho leh. Spundge waxay kuu ogolaaneysaa inaad: Raad-raac - La socoto waxyaabaha ugufiican, ee sida wanaagsan loogu abaabulay Buugga Xusuus-qorista mawduucyo, dhacdooyin, dad ama qaab-dhismeed kasta oo
Arbacada, February 25, 2009 Sunday, May 29, 2016 Douglas Karr
Qaar badan oo suuqleyda ah waxay ka faa'iideystaan ​​hal tiknoolojiyad ay ku raaxaystaan ​​ama ku raaxaystaan ​​oo ay iska indhatiraan kuwa kale. Anigu waxaan ahay taageere weyn oo otomaatig ah iyo suuqleyda ka faa'iideysanaya farriintooda si kasta, qaab, ama qaab - inta badan oo aysan waligood waxyeello u geysan dadaallada suuqgeynta. Marka la eego shirkad ka faa'iideysaneysa waxyaabaha ku jira boggeeda, maqaallada, wargeysyada, daraasadaha kiisaska ama mareegteeda, waxaan aaminsanahay inay jiraan saddex fure oo lagu sameeyo